Betiravy | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Fisotroana sikotra: ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny fambolena azy
Amin'ny ankapobeny, ny olona dia tsy isalasalana fa ny ronono siramamy dia fitaovana tsotra ho an'ny fikarakarana indostrialy, ary ny fambolena sy ny fambolena ihany no mikambana amin'ny fambolena azy. Mandritra izany fotoana izany, ny teknolojian'ny fambolena siramamy dia azo alaina ao amin'ny farafara zaridaina mahazatra amin'ny tompon'ny tany madinika.
Ahoana ny famenoana ny volombava ho an'ny ririnina ao amin'ny frizidera
Ny tsiranoka dia vokatra iray efa notehirizina nandritra ny fotoana lava, efa eo am-pelatanana mandritra ny taona izy io, ka toa tsy misy antony manokana amin'ny fanomanana azy amin'ny ririnina. Raha toa kosa anefa ny vokatra dia manjavozavo, nefa tsy misy trano fitehirizam-bokatra, tsy misy mijanona afa-tsy ny miezaka manamboatra ny fakan'ny faka. Toa hita fa misy fomba maro ahafahana manao izany fitaovana izany, araka ny filazany, "ao an-trano".
Fanondrahana tondra-drano: ny soa sy ny loza, ny fomba amam-panao, ny fampiharana
Ny ronono dia raisina ho iray amin'ireo legioma malaza indrindra any Okraina sy any ivelany. Ary tsy mahagaga izany, satria manan-karena amin'ny vitamina sy mineraly ny legioma mena. Ny fantsom-bokatra dia ahafahanao miaro ny vokatra mahasoa amin'ny vokatra mandritra ny taona manontolo. Ny tombony amin'ny fomba fanangonam-bokatra Ny olona dia efa nahatsikaritra fa raha voamaina tsara ny voankazo na legioma dia hihazona ny habetsaky ny zavatra ilaina.
Ny fomba hanamboarana ravina haingana sy mamy
Ny tsiranoka dia vokatra tsy dia hita loatra ao amin'ny latabay, fa tena ilaina koa noho ny haavo ao anaty fibre, karazam-pandrefesana sy vitamina (A, B, C), ary asidika organika sy amino asidra. Ampiasaina ho toy ny fanafody ho fanafody, manatsara ny rafitra sy ionokano endocrine, dia ilaina amin'ny sakafo ary ilaina amin'ny vehivavy bevohoka.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Betiravy